Ndị Zombie-Ndị Na-eso :zọ: Ndị Nwụrụ Anwụ Na-eje Ije Na Ofwa nke luzụ ahịa Ahịa | Martech Zone
Ga-ahụ profaịlụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke nwere ogo dị elu karịa ndị na-eso ụzọ, ọtụtụ puku ihe ndị masịrị gị, yana ahụmịhe mmekọrịta mmekọrịta gara aga - aghụghọ ma ọ bụ na-emeso?
Na ọnụ ọgụgụ nke mmetụta mgbasa ozi ahịa na-aga n'ihu na-ebili, ọ bụghị ihe a na-adịghị ahụkebe maka ụdị ndị a ga-adaba na aghụghọ nke akụkọ ndị dị otú ahụ na ndị na-eso ụzọ adịgboroja na ndị na-ege ntị na-adịghị mma.
Dị ka Hub Influencer Hub:
Ịzụ ahịa ahịa atọrọ ka etolite rue $ 9.7B na 2020.
300% karịa micro-mmetụta nnukwu ụlọ ọrụ na-eji ha eme ihe karịa na 2016.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke mkpọsa influencer niile gụnyere Instagram dị ka akụkụ nke ahịa mix.
Fraudghọ aghụghọ wayo bụ nchegbu na-arịwanye elu nye ndị zaghachirinụ nwere ihe karịrị 2/3 nke ndị zaghachiri ahụmahụ ya.
Nke a apụtaghị na ndị macro-influencers niile dabara n'ụdị a. N’ezie, apụl ọjọọ ndị ahụ adị ole na ole, ndị na-akwụwa aka ha ọtọ na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi karịrị nnọọ ha.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịghọta oke otu ị ga - esi họrọ onye na - emetụta ihe nwere ebumnuche kachasị mma maka gị na akara gị.
Ugbu a, anyị anaghị achọ ịtụ egwu onye ọ bụla site na ịre ahịa mmetụta. Nnọọ na-abụghị n'ezie. Enchọta enyemaka nke ụlọ ọrụ na-azụ ahịa na-emetụta ihe nwere ike inyere ndị ụdị aka ịchọta onye na-eme ihe ike na ndị na-ege ntị n'ezie ma na-ege ntị nke ga-enyere aka weghachi oke nloghachi na itinye ego.
Mgbasa mgbasa ozi bụ otu n'ime ndị na-ajụ ase na-enwetụbeghị ụdị ọnwa na-adịbeghị anya. Onye ahia ọ bụla nwere ike ịhụ na ọrụ nkwado na ntanetị dị mkpa iji mejupụta atụmatụ nke ika na-aga n'ihu. Na mmekorita influencer bu otu uzo di irè nke eji eme ihe.
Amelia Neate, Onye isi njikwa Mmetụta Onye Mmekọ
Amelia adighi nma. N'ezie, ịmanye ndị na-eme ngwa ahịa bụ usoro nnabata azụmaahịa na-eto ngwa ngwa n'ịntanetị, yana 22% nke ndị ahịa na-akpọkwa ya ihe kachasị ọnụ ahịa.
N'ihi ya, 67% nke ndị na-ere ahịa na ụdị gafee ọtụtụ ngalaba na-akwadebe ịbawanye ahịa ahịa ha na-etinye n'ime ọnwa 12 na-esote.
Ma, dị ka ụdị na-amalite ịmalite na ọrụ influencer, Amelia na-akọwa otu esi eme ihe kachasị mma na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-ahụ na ọ dị irè dị ka o kwere mee.
Adịla Onye Na-eso ụzọ Ya
Ndi na-eso uzo ugha na ndu ndi nwuru anwu biara n’udi di iche. N'ihe a maara nke ọma, ndị na-eso ụzọ zụtara bụ otu n'ime ndị nkịtị, ebe ndị mmadụ na-agba mbọ na-arụsi ọrụ ike na ịrị elu na mgbasa ozi mgbasa ozi, ma kama, kwụọ ụgwọ maka ndị na-eso ụzọ adịgboroja iji mee ka akaụntụ ha buru ibu karịa ka ọ dị.
Ọ bụ ezie na nke a na-aghọ ihe ndị ọrụ na aha dị iche iche katọrọ, belụsọ na achọpụtara ha, ọ nwere ike isi ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ndị na-eso ụzọ dị elu na nke adịgboroja.
Typedị ọzọ nke onye na-eso ụzọ adịgboroja bụ akaụntụ na-adịghị arụ ọrụ ogologo oge, ma nke ahụ ọ bụ n'ihi na mmadụ echefuola ya, achọghịzi iji ya mana ọ hichapụ profaịlụ, ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ.
Mana n'agbanyeghị ihe kpatara ya, akaụntụ na-adịghị arụ ọrụ nwere ike imetụta ọkwa ntinye aka n'ụzọ na-adịghị mma.
N'igosipụta otu nke a nwere ike isi bụrụ ihe na - emerụ ahụ maka ụdị ihe a, otu nnyocha achọpụtala na enwere ike inwe ọtụtụ 95 nde bots na-abata dị ka ndị na-eso ụzọ adịgboroja na Instagram naanị, na-efu azụmaahịa $ ijeri $ 1.3 na ndu na ọnwụ.
Iji lụsoo mmetụta ọjọọ nke a nwere na akara, iji ọrụ nke ụlọ ọrụ na-azụ ahịa nwere ike inyere aka mee ka uche zuru ike ma hụ na mkpọsa ahụ ga-eru ọtụtụ puku, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nde ndị na-eso ụzọ.
Igosiputa Okwu A
Enweela ọtụtụ ikpe kemgbe afọ ebe a hụrụ ndị nwere ikike imebi iwu ịzụta ndị na-eso ụzọ adịgboroja iji meziwanye echiche nke ike ha na ịbụ ndị a ma ama na nyiwe.
Ọmụmaatụ, ime Bake Off's Paul Hollywood chọtara onwe ya na asịrị na-eso ụzọ adịgboroja mgbe ọ kwụsịrị na Twitter mgbe ndị na-eso ụzọ ya kwụsịrị na mbubata nke ịkparịta ụka n'socialntanet na-ewepu akaụntụ adịgboroja n'elu ikpo okwu.
Nnyocha ndị ọzọ na-ekpughe ihe dị ịtụnanya fake na-eso uzo pasent n'ihi na ndị a ma ama, dị ka Kourtney Kardashian na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi.
Ọ bụ naanị ọnụ ọgụgụ na njedebe nke ụbọchị, nri? Mana maka ụdị ndị a, nke a kwesịrị ịtọ mgbịrịgba mkpu. Mgbe akara na-apụta mgbasa ozi mmetụta, ha na-eme ya n'okpuru echiche na akara ha ga-erute ndị na - ege ntị - na onye nwere mmekọ na nke ahụ. Ndị nwere ike ịnabata nnukwu ego maka naanị otu post, yabụ ndị ahịa kwesịrị ijide n'aka na nloghachi ahụ, dịka ọmụmaatụ, na iru ma ọ bụ ikpughe ha ga-enweta, buru oke ibu iji kwado mmefu.
Amelia Neate, Onye isi njikwa na ụlọ ọrụ na-azụ ahịa ahịa ụwa, Mmetụta Onye Mmekọ
Ya mere, Gini Ka Ndi Uche Kwesịrị Ime?
Amelia na-akọwa na enwere ọtụtụ ihe ị ga-elele anya mgbe gị na onye na-emekọrịta ihe na-emekọrịta ihe.
njikọ aka - Kama ilekwasị anya na ndị na-eso ụzọ, na-etinye mkpa dị ukwuu na ntinye aka. Ọ bụ ezie na ndị na-ege gị ntị mkpọsa gị nwere ike pere mpe, ndị ọ na-erute nwere ike iso gị mekọrịta ihe. Nke ahụ bụ otu ị ga - esi rụpụta nsonaazụ wee zute ebumnuche gị.
Micro-Na-emetụta - Micro-influencers na-enwekarị akara aka aka. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu, ndị na-ege ha ntị na-enwe mmekọrịta na mmekọrịta karịa ma yabụ, yabụ, nwere ike bụrụ ihe dị oke ọnụ ahịa maka ụdị.
amasị - Ọ bụ ezie na enwere ngwaọrụ ebe ahụ iji chọpụta ọkwa ntinye, ị nwere ike ịme nyocha nke gị site na ịtụle ndị na-eso ụzọ na ọnụ ọgụgụ nke mmasị profaịlụ profaịlụ.
Comments - Ọ bụrụ n ’ị ka na-ejighị n’aka gbasara izi ezi nke onye nwere mmetụta, ihe ndị ọzọ na-ekwu bụ ihe ọzọ. Lelee ma, apụ, ha na-enweta ihe ọ bụla na-ekwu na nke abụọ, ma e nwere ihe ọ bụla ụkpụrụ ma ọ bụ spam-dị ka ọrụ na ha. Dịka ọmụmaatụ, nkọwa sitere na ihe dị ka ndị ọrụ dị iche iche, mana nke niile gụrụ otu, nwere ike bụrụ bọọ.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịchọta enyemaka nke ụlọ ọrụ maka mkpọsa gị. Nakwa ngwaọrụ na nghọta nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ data iji nyere aka nyere aka aka na ihe ịga nke ọma nke mkpọsa ha. Agencieslọ ọrụ na-ere ahịa na -emepụta mmekọrịta na mmekọrịta siri ike na ndị na-eme ihe ike, ndị ha maara nwere ezigbo nsonazụ na ntinye aka.
Yabụ, tupu ịkụ aka n'ọnụ ụzọ nke profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta maka enyemaka na mgbasa ozi mmetụta gị ọzọ, jide n'aka na a ga-ezute ego gị na ọgwụgwọ ma ọ bụghị aghụghọ. Iji chọpụta ozi ndị ọzọ:
Gaa Leta Onye Na-akpata Mmekọrịta
Tags: Amelia dị mmanjikọ akammetụta aghụghọahịa ahịainfluencer onye na-eme egwuregwuKourtney kardashiannnukwu macromicro-influencerPaul Nwokocha